Ndị na-emepụta akpa egbe & ndị na-ebunye - ụlọ ọrụ akpa egbe China
OEM ịchụ nta / agbapụ waterproof akpa egbe 47 inch ogologo
Akpa Shortgun Shooting Padded nwere ihe nwere ntụpọ ojii nwere ntụpọ PVC dị mma n'ụdị siri ike, siri ike ma gbasie ike maka nchekwa kachasị, zippers ụzọ abụọ dabara adaba imeghe na nso.
Ihe No.LSH 1001
Ihe:600D Oxford mkpuchi mkpuchi + ihe nwere ntụpọ PVC
Agba:Black + oroma, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ebe Mbupu:TIANJIN, CHINA.
Ịkwụ Ụgwọ:T/T, L/C na anya, Western Union.
OEM ịchụ nta / agbapụ egbe mkpuchi akpa 52 inch ogologo
Akpa ịchụ nta / agba egbe, akwa 600D oxford nwere mkpuchi PVC ugboro abụọ, na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide ọgwụ, dị arọ ma dị mma iburu site na iburu eriri na eriri ubu, 1.8cm ogbo mkpuchi nwere ezigbo mma.
Ihe No.LSH 1002
Nha:52L * 8.5W inch
Agba:Bipute Green + Brown, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
OEM ịchụ nta / agbapụ égbè mkpuchi na ogbo padded
Mpempe ịchụ nta / agbapụ égbè akpa mmiri na-adịghị na akwa na-eguzogide ya na ihe PVC nwere ntụpọ, n'ime ya nwere sponge ọkpụrụkpụ 1.3cm na ọkpụrụkpụ 1cm EPE jikọtara ya na akwa polyester tricot 100%.
Ihe No.LSH 1003
Nha:50L * 11.5W inch
Agba:Green + Black, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Akpa OEM ịchụ nta / agbapụ egbe nwere akwa ụfụfụ akwa
Akpa ịchụ nta / agbapụ egbe nwere akwa mkpuchi mmiri na akwa akwa 600D oxford na 100% polyester, n'ime ya nwere ụfụfụ akwa 6cm.
Ihe No.LSH 1004
Agba:Green, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
OEM ịchụ nta otu mkpuchi Carabine
Na-ekpuchi akpa Carabine, akwa akwa mmiri na-adịghị na Oxford, na-adịgide adịgide na mgbochi ịdọka, nwa na ọbara ọbara, ngwakọta agba, dị mma iburu azụ site na eriri ubu, eriri na oghere.
Ihe No.LSH 1006
Agba:Black & Red, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Nkwakọ ngwaahịa:71*52*37cm, 50pcs/CN, 24KGS/CN
OEM ịchụ nta otu égbè na akpa akpa 50 inch ogologo égbè
Egbe ịchụ nta padded & akpa scope, siri ike ma gbasie ike maka nchekwa kachasị, zippers ụzọ abụọ dabara adaba imeghe na mechie.
Item nọmba: LSH 1007
Nha: 50L*10W inch
Ihe: 600D Oxford mkpuchi mkpuchi
Agba: Green gbara ọchịchịrị, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Nkwakọ ngwaahịa: 130*51*26cm, 20pcs/CN, 10.5KGS/CN
Oge nnyefe: Ihe dịka ụbọchị 65-75.
OEM China factory Shotgun Bag 49 inch ogologo egbe akpa
Shortgun akpa 49 inch ogologo na nkwado àgwà, na-ebu straps na azụ n'azụ, ubu straps abụọ ụzọ na-ebu outsidie.Site n'elu nghọta loop, akpa egbe nwere ike mfe, kpọgidere na mgbidi.
Ihe No.LSH 1008
Agba:Green gbara ọchịchịrị, agba aja aja, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
OEM China Factory ichu nta waterproof Eva Gun Cover
Ịchụ nta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mkpuchi mkpuchi ogologo 49 inch anaghị egbochi mmiri, ọrụ na-adịgide adịgide na mgbochi ịkpụ, Ọ dị mma iburu na iburu azụ, EPE kpuchie ya na 100% polyester tricot lining, yana ngwa siri ike.
Ihe No.LSH 1009
Agba:Bipute Green, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ịchụ nta mkpuchi mmiri Neoprene Scope Bag Riflescope
Akpa Neoprene nke enweghị mmiri n'èzí, akwa oxford 100% polyester, mgbochi ịkpụ, na-adịgide adịgide, N'ime ya nwere nnukwu ụfụfụ akwa 5cm nke nwere nnukwu njupụta na na-agbanwe iji chebe oke n'ime, ihe gburugburu.
Ihe No.LSH 1010
Nha:17L * 5.5W inch
Agba:Green gbara ọchịchịrị, Camouflage, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ịchụ nta mmiri na-adịghị akwa akwa egbe akpa 50 inch ogologo
Ichu nta green egbe akpa 50 inch ogologo waterproof, inogide na mgbochi ịkpụ, 6cm ọkpụrụkpụ, akwa ụfụfụ na ukwuu njupụta na na-agbanwe iji chebe n'ime àgwà egbe, adaba na-ebu, na-na azụ, na akpụkpọ anụ dị ka mma mara mma na siri imewe.
Ihe No.LSH 1011
Ihe:600D Oxford na akwa akpụkpọ anụ agwakọta
Agba:Green, Camouflage ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ịchụ nta mmiri anaghị egbochi mmiri ojii & agba uhie uhie Akpa
Ichu nta Black egbe akpa 50 inch mmiri adịghị ogologo, padding na 1.8cm ogbo bonded na, 100% polyester tricot ákwà, adaba na-ebu na-na azụ, nwa na-acha uhie uhie agba, Ịgwakọta mma mma, ụzọ abụọ zippers.
Ihe No.LSH 1012
Nha:50L * 12.5W inch
Agba:Ngwakọta ojii na uhie, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
1234Ọzọ >>> Peeji nke 1/4